प्रधानमन्त्रीबाटै स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन : प्रधानमन्त्रीलाई मापदण्ड लागु हुँदैन र ! | शुभयुग
प्रधानमन्त्रीबाटै स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन : प्रधानमन्त्रीलाई मापदण्ड लागु हुँदैन र !
७ बैशाख,काठमाण्डौ – मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले ‘मेला, महोत्सव, जात्रा, पर्व, विवाह, धार्मिक अनुष्ठान, मलामी लगायतका अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने भन्दै आदेश जारी गर्यो । देशमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट भित्रिएको हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा विज्ञको सल्लाहमा सरकारले भिडभाड नगर्ने तथा स्वास्थ्यको पूर्ण पालना गर्न जनतालाई आदेश दिएको छ ।
सरकारले जारी गरेको आदेशमा यो पनि भनिएको छ कि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी भएका मापदण्ड, योजना सबै निकायले व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने छ । सरकारी आदेशको पालना नभएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) अनुगमन गरी पालना गराउनु पर्ने छ । कोरोनाले हरेक व्यक्तिलाई लाग्न सक्ने हुँदा आदेशको अवज्ञा गर्ने वा आदेश कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० बमोजिम कारबाही र सजाय हुने पनि सरकारले चेतावनी दिएको छ ।
यो सबै फेहरिस्त लगाउनुको कारण हो, प्रधानमन्त्रीले आज (मङ्गलवार) बालुवाटारमा गरेको पूजाआजा । अयोध्यापुरीमा राखिने राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका मूर्तिलाई आज प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निवासमा धूमधामसँग पूजा गरेका छन् । सायद प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा अयोध्या खडा गर्न हतार भैसकेको थियो वा उनि विपक्षीलाई आफ्ना उपलब्धि देखाउन चाहन्थे । जे होस्, तर उनले माथि उल्लेखित गरिएका स्वास्थ्यका मापदण्ड भने कँहिकतै पालना गरेका छैनन् । तर मास्क चाहिँ लगाएकै छन् है ।
बाह्र वर्ष रामायण पढायो सिता कस्कि जोई।। भने जस्तो कोरोनाको नयाँ भेरियन्टले नेपालमा पाइला टेकिसकेको र सरकार आफैँले २५ जना भन्दा बढी भेला नहुने नियम बनाएको भएपनि ७० कटेका प्रधानमन्त्रीलाई भने त्यो कुरामा ध्यान गएन । आज बालुवाटारमा ‘श्री सीताराम शोभा रथयात्रा स्थापना समारोह’ मा उनकी पत्नी राधिका शाक्यलगायत २५ जना भन्दा बढी एकै ठाउँमा टाँसिएर सहभागी भएको देखियो । समारोहमा सहभागी हुने कोहीको त मास्क पनि आधा फुस्किएको तस्विरहरुमा प्रस्टै देखिन्छ ।
यसोमा हामी जनताले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे सजाय पाउने व्यवस्था छ । तर यहाँ त आदेश जारी भएको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्रीबाटै उल्लङ्घन भएको छ । अब प्रश्न यहाँ उठ्छ, के प्रधानमन्त्री लाई सजाय हुन्छ ? कि बालुवाटारमा कोरोना छैन र?